Oct 10,2021 चन्द्रागिरिको शुभतारा सेवाकेन्द्र उद्घाटन्
चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको शुभतारा सेवाकेन्द्र आज आश्विन २१ गते समुद्घाटन भई सञ्चालनमा आएको छ । साविक शुभतारा बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था लि. र चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.व...
चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हाम्रो टेक्नोलोजी(एम.बैंक)को प्राविधिक सहयोगमा सि.टि. एक्सप्रेस मनी ट्रान्स्फरसंग सहकार्य गरी नेपालमै पहिलो पल्ट सहकारीमा मोबाईल बैंकिङ एपबाट रेमिटान्स सेवा स...
काठमाडौं । चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारी एकिकरण अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । संस्थाले माघ ९ गते ललितपुरको खुमलटारस्थित शुभतारा बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थासंग पनि एकीकरणकालागि सम्झौ...